पार्टीमा झन्डा मात्रै बोकेर नेता बनाउने होइन, संगठित हुनुप¥यो : प्रकाश बस्नेत – अन्तर्वार्ता - टाकुरा न्युज
पार्टीमा झन्डा मात्रै बोकेर नेता बनाउने होइन, संगठित हुनुप¥यो : प्रकाश बस्नेत – अन्तर्वार्ता
इटहरी कांग्रेसको सभापतिका आकांक्षी प्रकाश बस्नेतलाई पाँच प्रश्न
इटहरी : नेपाली कांग्रेस सुनसरीले यही असोज ९ गते पालिकाका निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै नेता–कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो दौडमा छन् । यसैबीच कांग्रेस इटहरीको नेतृत्व गर्नका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका प्रकाश बस्नेत पनि आफूले सभापति पद जिते कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर जाने दाबी गर्दै आएका छन् ।
२०३३ फागुन १० सोलुखुम्बुको साबिक तिङ्लआ जन्मिएका बस्नेतले ०४९ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । ०६७ सालमा साबिक पकली गाविसको तरुण दल सभापति, कांग्रेसको पकली गाविस सचिव हुँदै हाल इटहरी उपमहानगरपालिकाको कांग्रेसका वर्तमान सचिव समेत छन् ।
अघिल्लो पटक १३ औँ महाधिवेशनमा आफू चुनावी मैदानमा होमिएर विजय प्राप्त गरेकाले पनि यसपटक सभापतिमा उमेद्वारी दिएको उनको भनाई छ । चुनावी मैदानमा होमिएका उनलाई टाकुरा न्यूजले गरेको कुराकानीको सारांश –
चुनावको मिति नजिकिदैँ छ, कसरी तयारी गर्दैहुनुहुन्छ ?
चुनावको मिति नजिकिदैँ जाँदा आफ्नो तयारीमा छु । पार्टी भित्रको विसङ्गति गुट, उपगुटु, गिरोह, व्यक्तिगत चरीत्रका आधारमा सम्भावना बोकेका ब्यक्तिले माथिल्लो ठाउँमा पुग्न नदिने प्रथा अन्त्य गर्नका लागि नेतृत्वको तयारी गरिरहेको छु ।
सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आउनुपर्छ, पार्टीभित्र मौलाएका ठेकेदारको अन्त्य हुनुपर्छ । अग्रजहरु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले ? पाखा लगाउने काम भएको छ, युवालाई अवसर र अग्रजलाई सम्मान भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि मैले नेतृत्व पदका लागि तयारी गरिरहेको छु ।
अन्य दुईजना पनि चुनावी मैदानमा होमिइरहेको बेला तपाईँलाई नै किन मत हाल्ने?
चुनावी मैदानमा उत्रदाँ टिम बन्नु स्वभाविक हो, उहाँहरु टिमबाट उठ्नुभएको छ । गुटकै नाममा सम्भावना बोकेका व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न रोकिन्छ भने पार्टी पनि कसरी अगाडि बढ्छ ? गुट उपगुटको आधारमा धेरै साथीहरू थिचोमिचोमा पर्नुभएको छ ।
नयाँ साथीहरुले अवसर कहाँ पाएको छ ? पार्टीमा झन्डा मात्रै बोकेर नेता बनाउने होइन, संगठित हुनुप¥यो । पार्टीमा गिरोह र ठेकेदारी प्रथा, व्यक्तिवादी हाबीको अन्त्य हुनुपर्छ । म फरक तरिकाको भिजन बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएका कारण पनि मलाई मत हाल्न आवश्यक छ ।
तपाईँ वर्तमान नगर सचिव हुनुहुन्छ, वर्तमान सभापतिले पनि पुनः उमेद्वारी दिनुभएको छ, फेरि तपाईँले नै सभापतिकै उमेद्वर दिनुपर्ने अवस्था कसरी आईप¥यो ?
वर्तमान सभापति हेमकर्ण पौडेल इटहरीको नेता हो । उहाँले दुई कार्यकाल सभापति चलाइसकेपछि पनि उहाँ नगरमा फर्किएर आउनु अस्वभाविक हो । आफूसँगका साथीहरूलाई अवसर दिने हो, उहाँ जत्तिको मानिस माथि जाने भन्ने हाम्रो कुरा थियो, उहाँले उत्पादन गरेको मानिस हौँ हामी । तर, उहाँले नै पुनः सभापतिमा उमेद्वारी दिएपछि यहाँको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ? उहाँ जत्तिको मानिस माथिका ठाउँमा जानुपथ्र्यो ।
कुरा रह्यो मेरोबारेमा । मैले नगर सचिव पनि चलाइसकेका कारण अब जाने ठाउँ भनेकै सभापति हो । मैले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितका लागि पनि सभापतिमा उमेद्वारी दिएको हुँ, हेमकर्ण जी ले अवसर बञ्चित गराउन खोज्नुभयो ।
यहाँलाई जिताएमा देख्न लायक के काम गर्नुहुन्छ ?
विपक्षीसँग लड्न पनि संगठन चाहिन्छ । पहिला संगठन दह्रो बनाउने अभ्यास गर्नेछु । अहिले संगठन कहाँ छ ? कहाँ छ नेपाली कांग्रेस इटहरी ? यहाँ त व्यक्तिवादी हाबी छन् । कार्यकर्ताको नजरमा पनि कांग्रेस कहाँ छ भनेर थाहा छैन ।
आगामी चुनावमा सबै पद कांग्रेसलाई जिताउन र यहाँका सर्वसाधारण मानिसको सुख, दुःखमा साथ दिनका लागि मैले जित्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । आउँदा दिनमा विपक्षीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र कार्यकर्ताहरुलाई कांग्रेस पार्टी भनेर गौरवान्वित बनाउने काम गर्छु ।
अन्त्यमा, भन्न मन लागेका केही कुरा ?
अहिले पनि कोरोना भाइरसको महामारी व्याप्त छ । कांग्रेस इटहरी अहिलेसम्म चुप भएर बस्यो । मैले पटक–पटक संगठनमा कुरा उठाउँदा कसैले पनि चासो दिनुभएन । यो समयमा हामीले आम सर्वसाधारणको मन जित्ने गरी विपक्षीमै बसेर पनि सृजनशील काम गर्न सक्थ्यौँ, सक्नुपथ्र्यो ।
हाल विभिन्न सामाजिक संस्था, शिक्षा, स्वास्थ क्षेत्रमा अनुगमन गरेर स्थानीय सरकारलाई झकझक्याउन आवश्यक थियो । तर, अब मेरो नेतृत्वले भने सिर्जनात्मक काम गरेर अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउँछु ।
Tags: #इटहरी#कांग्रेस#नेपाली कांग्रेसअन्तर्वार्ताकांग्रेस १४ औं महाधिवेशनप्रकाश बस्नेत